EDuke32: Sidee loo rakibaa loona ciyaaraa Duke Nukem 3D oo ku yaal GNU / Linux? | Laga soo bilaabo Linux
Maanta, maalinta ugu horreysa ee Juun, waxaan la imaaneynaa ciyaar kale oo qurux badan oo waagii hore ah madadaalo, xiiso iyo koritaan Liiska Ciyaaraha del Nooc FPS ah (Qofkii ugu horreeyay ee wax toogta) maxaan ku ciyaari karnaa GNU / Linux. Tanina wax kale ma aha ee waa duug iyo adduun la yaqaan Duke Nukem 3D gacanta ka "EDuke32".
"EDuke32" waa fursad aad u fiican kuwa is tixgeliya isagana oo ka mid ah "Iskuulkii Hore", ayaa markale ciyaari kara wax aad u cajiiba oo caadi ah Ciyaaraha FPS ee ku saabsan GNU / Linux, oo beddelaya Windows 95/98, laga bilaabo da'daas dahabiga ah ee 16/32 ciyaaraha Bit.
Iyo kuwa jecel Ciyaaraha Linux, iyo gaar ahaan loogu talagalay Ciyaartoyda FPS Game oo ka mid ah "Iskuulkii Hore", waxaan kaaga tagi doonaa hoosta qaar ka mid ah waxyaabihii ugu dambeeyay ee la xiriira ee ku saabsan caddibaadda iyo ciyaaro kale oo la mid ah
"GZDoom waa mid ka mid ah 3 dekedda hadda jira ee ay leedahay ZDoom, taas oo ah qoys ka soo hagaagay Dekedaha mashiinka ciqaabta si loogu fuliyo Nidaamyada Hawlgalka casriga ah. Dekedyadani waxay ka shaqeeyaan Windows-ka casriga ah, Linux, iyo OS X-da, iyagoo ku daraya astaamo cusub oo aan laga helin ciyaaro markii hore ay daabacday Id Software. Dakadihii hore ee 'ZDoom Ports' waa la isticmaali karaa loona qaybin karaa si bilaash ah. Faa'iido lagama heli karo iibkeeda. GZDoom iyo faraciisa nooca 3.0.0 waxay shati ka haystaan ​​GPL waxayna ku xiran yihiin shuruudaha iyo xaddidaadaha shatiga cusub." ¿Sidee loo ciyaaraa Qiyaamaha iyo ciyaaraha kale ee la midka ah ee FPS iyadoo la adeegsanayo GZDoom?
1 EDuke32: Duke Nukem 3D oo loogu talagalay GNU / Linux
1.1 Waa maxay EDuke32?
1.3 Soo dejiso, rakibo, isticmaal iyo shaashadda shaashadda
EDuke32: Duke Nukem 3D oo loogu talagalay GNU / Linux
Waa maxay EDuke32?
Sida laga soo xigtay horumariyayaasheeda degel rasmi ah, "EDuke32" es:
"Mashiinka ciyaarta guriga oo bilaash ah iyo la qabsashada ciyaarta ugu horreysa ee toogashada qof PC ah oo loo yaqaan Duke Nukem 3D (Duke3D), oo loo heli karo Windows, Linux, Mac OS X, FreeBSD, aalado kala duwan oo la qaadi karo, iyo kuwo kale oo badan. Intaa waxaa sii dheer, waxaan ku darnay kumanaan astaamo waxtar leh oo soo jiidasho leh iyo cusbooneysiin loogu talagalay ciyaartoy caadi ah, iyo sidoo kale awood dheeri ah oo dheeri ah iyo kordhinta qoraalka loogu talagalay soosaarayaasha homebrew iyo hal abuureyaasha moodeelka. EDuke32 gabi ahaanba waa bilaash in lagu isticmaalo softiweer il furan ujeeddooyinka aan ganacsiga ahayn oo dhan."
Kuwo badan muuqaalada, shaqooyinka iyo wararka maxaa ka mid ah "EDuke32", 10ka soo socda waa la xusi karaa:
EDuke32 waxaa shati ka haysta shatiga GNU GPL iyo Shatiga BUILD.
Waxay u shaqeysaa asal ahaan iyada oo aan ku xirneyn nooc kasta oo jilitaan ah.
Waxay ku socotaa qaraarro sare, sida: 3072 x 2304.
Waxaan kuu ogolaanayaa inaad kala doorato labada shirkadood ee kala duwan ee xawaaraha ku shaqeeya ee OpenGL, ama qaabka casriga ah ee aad ku soo barbaartay.
Waxay hagaajinaysaa tiro waalli ah oo cayayaanka ah oo aan dhib lahayn maalmihii DOS, laakiin waxay u dhintaan moodooyinka casriga ah ee xusuusta la ilaaliyo. Sidaa awgeed, EDuke32 wuxuu burburaa wax ka yar kii asalka ahaa.
Hadda waa dekedda kaliya ee Duke3D si firfircoon loo horumariyo loona dayactiro sanado.
Waxay soo bandhigeysaa qoraaga "Polymer" ee cajiibka ah ee Plagman, kaas oo badalaya kii "Polymost" ee Ken Silverman.
Waxay leedahay tiro badan oo cusub oo lagu kordhiyo nidaamka qoraalka ciyaarta, oo u oggolaanaya qaababka ciyaarta ee xitaa tartamaya xitaa ciyaaraha casriga ah.
Waxay ku socotaa HRP taageerada dhammaan qaababka, badankooduna waxay u baahan yihiin EDuke32; ma jirto deked kale oo socon kartaa HRP oo leh astaamo dhan oo awood leh.
Ku dar konsol-muuqaal ah oo buuxa, oo ay ku jiraan isku xirnaanta furaha Quake-style, magacyada amarada, dhammaystirka tabka sare, taariikhda taliska oo buuxa, qoraalka midabka leh, iyo waxyaabo kaloo badan.
Nota: Wuxuu ku yimaadaa oo keliya luqadda Ingiriiska.
Si aad u soo dejiso, waa inaad tagtaa waxyaabaha soo socda isku xirka oo soo dejiso feylka hadda jira ee la yiraahdo:
Iyo tan kale isku xirka, feylka magaciisu yahay:
Wixii rakibiddeeda, waa inaad furtid faylka «eduke32_src_20210629-9443-33e98f55a.tar.xz» gudaha galka aan la furin ee la abuuray waa inaad nuqul ka sameysaa feylka "Duke3d.grp". Kadibna waa in la soo uruuriyaa, si loo abuuro fulinta iyada oo la adeegsanayo amarka soo socda ee ka soo baxa gudaha galka uu abuuray decompression:
Iyo isticmaalkeeda (fulin), haddii ay dhacdo isku duubnaan guuleysata, kaliya amarka soo socda waa in lagu fuliyaa:
Si aad u adeegsato wax ku ool ah, waxaa lagugula talinayaa inaad dib ugu magacawdo galka aan la furin "Eduke32". Hadday dhacdo isku-darka ama fulinta, isku day inaad rakibto xirmooyinka soo-jeedinta ah ee soo socda:
para macluumaad rasmi ah oo dheeraad ah ku saabsan rakibida iyo isticmaalka "EDuke32" ku saabsan kala duwan Nidaamyada hawlgalka, iyo kaladuwanaansho Qaybinta GNU / Linux la taageeray, marin ka hel xiriiriyeyaasha soo socda adiga -Leaks:
Dhisida EDuke32 ee Linux
Nota: Kiiskeena wax ku oolka ah, waxaan u adeegsanay Dib u soo celi Linux loo yaqaan Mucjisooyinka GNU / Linux taas oo salka ku haysa MX Linux 19 (Debian 10), oo waxaa la dhisay ka dib markii our «Hagaha Snapshot MX Linux».
"EDuke32 waa boqorka muran la’aan ee dekadaha Duke Nukem 3D."
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «EDuke32», taas oo ah ciyaarta mashiinka ciyaarta guri bilaash ah iyo la qabsasho ka mid ah ciyaarta toogashada qof ugu horeysay classic loogu talagalay PC loo yaqaan Duke Nukem 3D; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » EDuke32: Sidee loo rakibaa loona ciyaaraa Duke Nukem 3D oo ku yaal GNU / Linux?
Iyo sidii had iyo jeer iyada oo aan dib-u-eegis lagu sameynin luqadaha la heli karo.
Ku jawaab Bravo
Waad salaaman tihiin, Bravo. Waad ku mahadsantahay faalladaada iyo u kuurgalidaada. La dhammeeyay, ayaa lagu daray qoraalka: «Fiiro gaar ah: Kaliya wuxuu ku yimaadaa Ingiriisiga, qaybta astaamaha.»
Ka jawaab Deadpool
Farxad, Deadpool. Waad ku mahadsan tahay faalladaada. Maktabaddee (fayl) aad tilmaamaysaa? Waxaan kaliya isku dayay nidaamka rakibidda oo dhan waxayna u shaqaysaa si kaamil ah. Mise waxaad ula jeedaa qayb ka mid ah ciyaarta oo ay ku jirto Maktabad?
Deepin wuxuu raacayaa talaabooyinka Windows 11 waxaadna ku rakibi kartaa barnaamijyada Android kaydkiisa
Juun 2021: Wanaagga, xumaanta iyo xiisaha Software-ka Bilaashka ah